Political Archives - Page 209 of 210 - Yangon Media Group
လွှတ်တော်တွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်၏ ဖြေကြားချက် ကျေနပ်အားရမှု မရှိဟုဆို
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ လွှတ်တော်တွင်းမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်၏ဖြေကြားချက်မှာ နည်းလမ်း ဟောင်းအတိုင်းသာဖြစ်သည့်အတွက် ကျေနပ်အားရမှုမရှိကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေဘုန်းလတ်က ပြောသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်...
ဦးကိုနီအသတ်ခံရမှု အရေးကြီးသက်သေ ဦးအောင်စိုး ထွက်ဆို
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီ အသတ်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသက်သေတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်စိုး(စာရေးဆရာ အင်းစိန် အောင်စိုး)က အထူးတရားရုံးတွင် လာရောက် ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားလိုပြသက်သေအဖြစ် ဦး အောင်စိုးအားစစ်ဆေးခဲ့ရာ...
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ခွာရန် နယ်စပ်အနီ?
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှဘင်္ဂါလီများသည် စား ဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်လည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ကျေးရွာတွင်လုံခြုံမှုမရှိဟု ယူဆ၍လည်းကောင်း၊ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့် ဘင်္ဂါလီများကထွက်ခွာရန် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းများကြောင့် လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့အုပ်စုသည် လူနည်းစုဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံရှိ ၎င်းတို့မျိုးနွယ်စု...
Myanmar Now အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဆွေဝင်းအား အာမခံပေးထားမှု နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ပေးရန် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်
မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ Myanmar Now အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဆွေဝင်းအား အာမခံပေးထားမှုကို တစ်ဖက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးသို့ တက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် မန္တလေးခရိုင်တရားရုံး၌ နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ပေးရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ...
ကချင်၊ ရှမ်း(အရှေ့)၊ ကယား၊ ကရင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မိုင်းကြောင့် ထိ??
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေ ဖြင့် မိုင်းနယ်ရှိသည့် ဒေသများ ဖြစ်သော ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်း (အရှေ့)၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင် ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်များသို့ ၂ဝ၁၇...
အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ဦးဆောင်သူများကို ပဉ္စမအကြိမ် ရုံးထုတ်၊ ခရိုင
မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ မန္တလေးသာသနာ ၂၅ဝဝ သပိတ်စခန်းမှ အစိုးရအားဆန့်ကျင်သ ပိတ်မှောက်ခဲ့သူများကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ခန့်က မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ်ကွက်ရှိ...
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဒုအိုးသည်၊ ဇင်ခါးမ၊ ဘိုလီနှင့် ငွေတောင်ကျေးရွာတို့မှ ဘင်္ဂါလီများ ဘင်္ဂ??
မောင်တော၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ မောင် တောမြို့နယ်၊ အလယ်သံကျော်ကျေး ရွာအုပ်စု၊ လေယာဉ်ကွင်းကျေးရွာတွင် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်အတွင်းမှ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်မည့် ဘင်္ဂါလီများ ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ မောင်တောခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းပါဝင်သောအဖွဲ့သည်...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင် တရားမဝင် ရောက်ရှိလာသော ဘင်္ဂါလီနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ မင်္ဂလာတောင် ညွန့်မြို့နယ်တွင် တရားမဝင်ရောက်ရှိလာ သော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်၊...
NLD ကို စတင် ထူထောင်စဉ်က ကိုင်စွဲခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတို့ကို မည်သည့် အြေ?
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စတင်ထူ ထောင်စဉ်ကိုင်စွဲခဲ့သောအခြေခံ လမ်းစဉ်ဖြစ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအရေးများကို မည်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ဆက်လက်ကိုင်စွဲသွားရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးဟံသာမြင့်ကတိုက်တွန်း ပြောကြားသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပခဲ့သည့်...
တင်းမာမှု နယ်ပယ်များကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ အမှန်တရားနှင့်အတူ ဖြေရှင်းလျက်ရှိကာ ပြည်သူနှင့်အတ?
ရန်ကုန် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသော တင်းမာမှုနယ်ပယ်များကို အမြော်အမြင်ရှိရှိ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ဖြင့် အမှန်တရားနှင့်အတူ ရပ်တည်ဖြေရှင်း လျက်ရှိကာ မည်သို့ဖြစ်စေကာမူ ပြည်သူနှင့်အတူ မူဝါဒသစ်များကို ချမှတ်ရန် သတ္တိရှိ ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း ၂၉ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်...
Page 209 of 210 Prev 1 … 208 209 210 Next
အောင်လံမြို့ အမှတ်(၂)ဈေး ဆိုင်ခန်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်၊ ပျံကျဈေးသည်များကို ခြောက်လ ရောင်းချ?
အသင်းအပေါ် မနာလိုဖြစ်နေကြခြင်းဟု မန်စီးတီးဥက္ကဋ္ဌ မူဘာရက် တုံ့ပြန်
ကျောက်နှင့် ရွှေထွက်ရှိရာဒေသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ နည်းပါးလာသောကြောင့် အညာဆန်ရေယာ?
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဆည်လေးတောရွာရှိ အများသုံးရေကန် ခန်းခြောက်နေ၍ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲဖြစ်ပေ?
စင်ကာပူတွင် မြန်မာအိမ်အကူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အထပ်မြင့်တိုက်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံးမှု၊ တရားစွဲအ?